Qabxiilee 20 jireenya gammachuun guutame akka jiraannuuf nugargaaran - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Qabxiilee 20 jireenya gammachuun guutame akka jiraannuuf nugargaaran
Jireenya gammachuu qabdu jiraachuuf dirqama sooreessa ta'uun nurraa hineegamu
Jireenya injifachuun, jireenya gammachuun guutamte jiraachuun waan salphaa miti; hedduun namaa saahuu hawwa garuu. Haala jireenya keenyaa, haaluma jirru keessatti jechuudhaa, malaan geggeeffanne taanaan jireenya woyyaa/gammachuu qabdu jiraachuun inuma danda’ama. Afaan biraatiin akkuma jireenya fooyya’iinsa qabdu jiraachuuf tattaafatuu qabnu gammachuun jiraachuunis wontuma hojjachuun, dafquun, tattaafachuun argamu, bira gayamu.
Qabeenyaan sooramuun dirqamaa miti; jireenya gammachu qabdu jiraachuuf.
Jireenya gammachuu qabdu, tan dukkanaafi abdii kutannaan ala taate, jiraachuuf qabxiilee asii gadii irratti hojjachuun barbaachisaadha. Kan biraa hinjiru jechuu kiyyaa miti.
Hireefi carraa xixiqqoo guyyaa guyyatti uumamanitti fayyadamuu danda’uu.
Namoonni biroo waa’ee koo maal yaadu, maal jedhuu irraa gabaabbachuu.
Waan namoonni biroo argataaraniifi hojjataaran dhimma itti qabaachuu dhabuu.
Ufirratti invest godhuu [barumsa, beekumsaanis ta’e waan birootiin].
Oduu dhiisanii waan danda’amuufi hojjatamuu qabu hunda hojjachuu.
Onnee guutuun hojjachuu.
Hujii keessatti sababa tarressuu dhiisanii bu’aa argamsiisuu.
Dogoggora hojjachuuf qophaayuu [itti yaadanii ta’uu qaba jechuu koo miti]
Cinqaafi hiraarii kaleessaa dagachuu.
Ufitti gadduufi ufiif gadduu dhiisuu.
Murannoo cimaa qabaachuu.
Waan itti amante argachuuf hedduu tattaafachuu.
Ati yaada keetiin funduratti adeemuu, osoo yaanni kee siin hinadeemin.
Yaada poozetiif ta’e qabaachuu.
Yeroo kee gara guddaa namoota gaggaarii wojjiin dabarsuu.
Ufii keetiif dhaabbachuu.
Namoota badii sirratti raawwataniif dhiifama godhuu danda’uu.
Imala keetti gammaduuf qalbii guutuun jiraachuu.
Previous articleDaldalli alergii abaaboofi kuduraa Itoophiyaa guddataa dhufuun beekame
Next articleTaphoota Priimer Liigii Ingiliiz sanbata kana geggeeffame Arsenaaliifi Manchastar Siitiin injifannoon xumuran